प्रेमीको नाममा सिन्दुर लगाएर नेपाली सेनामा भर्ति हुन लागेकी रञ्जनाले गरिन होटलभित्रै आत्महत्या, सुसाइड नोटमा यस्तो लेखिन् ! – Music Our Choice
प्रेमीको नाममा सिन्दुर लगाएर नेपाली सेनामा भर्ति हुन लागेकी रञ्जनाले गरिन होटलभित्रै आत्महत्या, सुसाइड नोटमा यस्तो लेखिन् !
admin	 Last updated Oct 12, 2020 44 0
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार १७:०३
५ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:४८
प्रहरीले उनी झुण्डिएको कोठा खोलेर हेर्दा एउटा मोवाइल र सुसाइड नोट फेला परेको छ । जुन मोवाइल तीन टुक्रा परेको अवस्थामा देखिएको छ भने सुसाइड नोटमा प्रेमीको नाम समेत लेखेकी छन् । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
घट्ना घटेको थाहा पाए लगतै आफन्तहरु होटलमा रुवाबासी गर्दै पुगेका थिए । आफन्तका अनुसार उनि अविवाहित थिईन् तर उनले कुनै केटाको नाममा सिउदोमा सिन्दुर हालेर आत्महत्या गरेको आशंका गरेका छन् ।